Posted by ညီလင်းသစ် au 29.9.10
နေလို့ ကောင်းလိုက်မယ့် နိုင်ငံလေး လူဦးရေက နည်းနည်းလေးနဲ့ တိုးတက်ပြီး ခေတ်မှီတဲ့ နိုင်ငံလို့ထင်တယ် အရင်ကတော့ သိပ်မသိဘူး ကျနော်က တင်းနစ် ခရေဇီဆိုတော့ ကျနော်ချစ်တဲ့ တင်းနစ်မယ်ဟောင်းလေး မာတီနာဟင်ဂစ် ခုချိန်ထိ ကြိုက်ဆဲ အားပေးဆဲဖြစ်တဲ့ ရော်ဂျာဖက်ဒါရာ တို့ကြောင်း ဆွစ်နိုင်ံအကြောင့် ဒင်ရှင်နယ်ရီတစ်အုပ်နဲ့ဖတ်ဖူးတယ်း)
အားတော့နာပါရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့လူနေမှုပုံစံနဲ့ လှပတဲ့နေရာလေးတွေအကြောင်း ပြီးတော့ အဲ့နိုင်ငံရောက်နေတဲ့ အရှေ့တိုင်းသား အစ်ကို့ရဲ့ ခံစားချက်တစ်ချို့ကိုလည်း ဖတ်ခွင့်ရရင် ဖတ်ချင်ပါသေးတယ် ။ ကျေးဇူး ဘရား
C'est tres bon pour vous est les personnes qui habituez la ba,n'est pas?
ဖက်ဒရယ်ကြောင့် ဆွစ်ကို လူတွေပိုသိလာတာ အမှန် ပါပဲ၊ ဒီနိုင်ငံရဲ့ နေရာဒေသ၊ လူနေမှု၊ ကျနော့်ရဲ့အမြင် စတာတွေကို အဆင်ပြေသလို ရေးသွားမှာပါ။
စာလာဖတ်တဲ့အတွက် Danke schön!
En effet, on peut dire que c'est bien d'y vivre de manière générale. Merci pour la visite!